Umzi mveliso we-SLIMMING WOMZIMBA - China Umzimba wokwenza izinto ngomatshini abavelisi, abaxhasi
I-40K Cavitation LipoLaser Vacumm RF Skin Qinisa i-Body Slimming BS02 +
I-6IN1 Cavitation 40K I-Lipolaser Vacuum Ukulahleka kobunzima bokuqinisa ulusu lwe-flaccid, ukuLungisa iStriae gravidarum, Ukuphulukana nobunzima be-bod.
Umatshini we-EMSculpting Electro Magnetic Muscle Stimulation Fat Buming Machine CLS05
Itekhnoloji ye-HI-EMT) yasentsimini yokuqhubela phambili ukugqabhuka okufutshane kwezihlunu ezinamandla ezikhokelela ekwandeni koxinano lwemisipha, ukunciphisa ivolumu, inkcazo engcono, kunye nethoni ephuculweyo.
I-RF Cryolipolysis Slimming ezimbini ze-cavitation cryolipolysis vacuum BD09
Umatshini weCryolipolysis yindlela entsha, engafunekiyo, ekhuselekileyo yokunciphisa ngobunono nangempumelelo amanqatha ekujolise kuwo akhokelela ekunciphiseni, ekujongeni kwendalo okujonga ukutyeba komzimba.
I-650nm / 940nm Lipo Laser Cavitation Fat Machine yokuThintela ukwehla komzimba CS02
Amanqanaba asezantsi amandla e-laser akhutshwa yi-CS02-Laura evuselela inwebu yeseli enamafutha, etshintsha amandla abo. Iiseli zilahlekelwa yimilo yazo ejikelezayo, kwaye kukhutshwa amanqatha e-intracellular.